Daryeelka Caafimaadka Qabiilka - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Kheyraadka Xubinta > Daryeelka Caafimaadka Qabiilka
Daryeel la awoodi karo iyo taageerida beelaha qabiilooyinka.
Marka qof noo doorto qorshahooda caafimaad, waxaan u qaadaneynaa masuuliyadaas si dhab ah. Waxaan ka mahadcelineynaa kalsoonida xubnaheena ay nagu aaminaan inay noqdaan lamaanahaaga caafimaadka. Laga soo bilaabo bilowgii, waxaan ka shaqeynay inaan u daaweyno xubin kasta oo ka mid ah xubnaheena qof ahaan waxaanan u doodnaa xubin kasta caafimaadkiisa shaqsiyeed. Taasi waxay ka dhigan tahay in la ixtiraamo baahidooda shaqsiyeed, waaya-aragnimadooda, iyo yoolalka ay ku bixinayaan daryeel tayo sare leh iyo helitaanka ilaha deegaanka.
Waxaan la kulannaa xubno ka tirsan beeshooda. Xubnaha u aqoonsaday Dhaladka Mareykanka ama Dhaladka Alaska, daryeelkaaga ayaa la daboolayaa haddii aad dooratid inaad aragto bixiye caafimaad caafimaad ama mid ka mid ah bixiyeyaasha shabakadeena.
Waxaa Washington ka jira 29 Qabiil oo federaalku aqoonsan yahay. Qabiil kastaa waa mid gaar ah, qofkasta oo Hindi Mareykan ah ama Alaskan Asal ahaan kasoo jeeda oo la aqoonsaday wuxuu la kulmaa dhaqankooda qaab u gaar ah. Ixtiraamka aqoonsiga dhaqameed ayaa ah udub-dhexaadka qaabkeena daryeelka bulshada.
Faa'iidooyinka Qorshaha Faa'iidada Medicare ee CHPW
'' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' Kaarka Faa'iidada ee 'CHPW Medicare Advantage' ayaa bixisa ilo dhaqaale si ay uga caawiso xubnaha in ay gacanta ku hayaan caafimaadkooda. Marka lagu daro daryeelka aasaasiga ah, daryeelka gaarka ah, iyo caymiska dawada dhakhtarku qoro, waxaan ku soo qaadaneynaa adeegyada bulshada ee gobolka iyo maxalliga ah si aan uga caawinno xubnaha inay caafimaad qabaan inta udhaxeysa baaritaanada. Waxaan aaminsanahay in caafimaadku ka badan yahay uun inaan awoodno inaan aragno bixiye, iyo qayb ka mid ah shaqadeena maadaama qorshahaaga caafimaad uu kaa caawinayo inaad hesho dhammaan adeegyada aad u baahan tahay.
Ma lihid lacag-bixinno lacag-bixin ah markii aad ka hesho adeeg caymis ku jira adeegga caymiska ama la oggolaaday. Waxaan bixinaa helitaan buuxa ee adeegyada caafimaadka, oo ay kamid yihiin:
Daryeelka caafimaadka maskaxda bukaan jiifka
Caafimaadka maskaxda ee isku dhafan iyo daryeelka isticmaalka maandooriyaha oo ay kujirto daaweynta daaweynta MAT
Maareeyayaasha Daryeelka ee kaa caawin kara inaad dhex mushaaxdo nidaamka caafimaadka oo ay kuu doodaan
Xubnahayagu waxay marin u leeyihiin faa'iidooyin dheeri ah sida xubinnimada jimicsiga iyo caymis dheeri ah oo loogu talagalay daawooyinka kale. Daawooyinka kale waxaa ka mid ah xanuunka loo yaqaan 'chiropractic, acupuncture iyo naturopathy', illaa 12 ballamo sanadkiiba. Haddii aad aragto adeeg bixiye shabakad ah ama bixiyahaaga Caafimaadka Qabiilka, daryeelkaaga ayaa daboolaya.
Caafimaadka Habdhaqanka iyo Isticmaalka Maandooriyaha
Daryeelka caafimaadkaaga shucuureed iyo maskaxeed waxay lamid tahay sida daryeelka caafimaadka jirkaaga. Dad badan ayaa la halgama caafimaadka maskaxda ama arrimaha isticmaalka mukhaadaraadka inta ay nool yihiin.
Qorshe caafimaad ahaan, habkayagu wuxuu daaweynayaa caafimaadkaaga oo dhan. Waxaan kaa caawin karnaa inaad heshid ilo aad ku daaweyso caafimaadka habdhaqanka ama arrimaha isticmaalka maandooriyaha - oo ay ku jiraan daaweynta daaweynta MAT Waad arki kartaa mid ka mid ah bixiyeyaashayada ku jira shabakadda umana baahnid gudbin. Adeegso xiriiriyeyaasha hoose si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Baro badan oo ku saabsan adeegyada caafimaadka hab dhaqanka.
Haddii dhibaato ku haysato, kala hadal a lataliyaha dhibaatooyinka.
La kulan Natalie, CHPW Liason Qabiil
Xiriiriyahayaga Qabiil, Natalie Christopherson, wuxuu ku saleysan yahay harada Moses waxayna xubin ka tahay Cherokee Nation. Waxay halkan u joogtaa inay u dooddo baahiyahaaga oo ay kuu noqoto kheyraad adiga kugu habboon. Waa tan Natalie iyada oo ereyadeeda iska leh: “Waxaan isku dayay inaan isku daro waxbarashadeyda iyo barbaarinteyda shaqsiyeed iyo danaha aan ugu adeegayo xubnaheena qabiilka ah. Doorkani wuxuu awood ii siinayaa inaan la shaqeeyo CHC-yadayada, iyo Bixiyeyaasha kale ee Caafimaadka Hindida si aan ugu xirno xubnaheena qabaa'il daryeel caafimaad oo tayo leh iyo ilo ku habboon si loo hubiyo in daryeelka qof walba loo fidiyo bulshadayada qabiilooyinka ah. ”